Iyo Yepamusoro 5 Nzira dzekusimudzira Yako Nhare Kubhadhara Maitiro | Martech Zone
Iyo Yepamusoro 5 Nzira dzekusimudzira Yako Nhare Kubhadhara Maitiro
China, Gumiguru 26, 2017 Eran Feinstein
Smartphones uye mahwendefa ari kuwedzera anozivikanwa zvishandiso anoshandiswa nevanhu mazuva ese. Kana zvasvika kune ecommerce, nhare mbozha dzave kuita sarudzo inozivikanwa, nekuda kwekureruka uye nyore kuita muripo chero kupi, chero nguva, nekungobata mashoma. Semunhu mutengesi, kuwedzera yako nhare yekubhadhara inzira inokosha yekudyara inozotungamira mukuwedzera kugutsikana kwevatengi, uye pakupedzisira - kwakawanda kutengesa.
Maitiro ekubhadharira mashoma anozokumisa iwe kuti usvike kune zvinangwa zvekutengesa zveindasitiri yako uye zvinogona kukonzera huwandu hwakawanda hwekudzorera. Kana iwe waona izvi zviratidzo, zvinonyanya kukosha kuti iwe ugadzirise. Pane akati wandei matanho aunotora kuti ukwidziridze nhare yekubhadhara nzira. Heano mashanu epamusoro:
1. Gadzira Nhare-Inoshamwaridzana Saiti
Ichi ndicho chinonyanya kukosha mukugadzira yemaitiro ekubhadhara mafoni. Yako webhusaiti inofanirwa kuve inoteerera - ichizvishongedza pachayo yekushandisa nhare kuitira kuti vashandisi havafanirwe kuswededza mukati kana kudzvanya pamabhatani madiki. Mawebhusaiti asina kugadzirirwa nharembozha anoshungurudza uye anogona kudzivirira vatengi kupedzisa maitiro ekubhadhara zvachose. Maererano ne Adobe, vangangoita vasere kubva pa8 vatengi vaizorega kuita zvemukati kana ikasaratidza zvakanaka pane yavo kifaa.
Dhizaini yakachena, ine mashoma, ine mabhatani mahombe uye zvinyorwa zviri nyore kuverenga, zvinoita kuti mutengi aenderere mberi nekukurumidza nekutenga nekutengeserana. Dzimwe PSP dzinogona kupa yakapihwa mapeji ekubhadhara ayo akagadzirirwa kunyanya vashandisi vefoni.
Pamusoro pewe webhusaiti-inoshamwaridzika webhusaiti, unogona zvakare kugadzira nharembozha. Vashandisi vanogona kudhawunirodha iyo app kune yavo nhare mbozha uye vhure iyo nekamwe chete tap, chengeta yako brand paminwe yavo, 24/7.
2. Govera Mobile Kubhadhara Maitiro
Zvinogona kutaridza sekutaura zviri pachena, asi uchipa mobile mubhadharo nzira ndiyo nzira huru yekukwezva vatengi nhare mbozha. Iyo PSP yaunoshanda nayo inokwanisa kukwanisa kubatanidza nzira dzekubhadhara nharembozha, senge ma mobile wallet uye nharembozha, izvo zvinobvumidza vashandisi kubhadhara nefoni dzavo. Dzimwe nzira dzekubhadhara, senge kushandisa kiredhiti kadhi, inosanganisira kuisa ruzivo nemaoko, izvo zvinonetsa pane diki skrini uye zvinotora nguva yakawanda. Mukupesana, muripo wefoni unogona kuitwa nema swipes mashoma uye matepi. Iyo inokurumidza iyo nzira yekubhadhara, zvakanyanya mukana wekuti mutengi ange achizadzisa, zvakanyanya kudzikisa ngoro yekutengera kusiiwa.
3. Bvumira Omni-Chiteshi Shopping
Tekinoroji iri kwese kwese - unogona kuve nevatengi vazhinji vanotanga kubhurawuza webhusaiti yako kumba uye vanoshuvira kupedzisa kutenga kwavo pa-iyo-kuenda, nefoni yavo mbozha. Kana nzira dzako dzekubhadhara dzichienderana, izvi zvinova zvisiri-nyaya. Tsvagiridzo na Aberdeen Boka vakawana kuti makambani ane omni-chiteshi vatengi ekubatisa mazano aive ne89% yekuchengetedza mwero, zvichienzaniswa ne33% chete pasina. Yako nhare mbozha kana app inofanirwa kunge yakafanana neyako desktop desktop muchitarisiko. Inofanira zvakare kupa imwecheteyo nzira dzekubhadhara - taura nePSP yako kuti uone kuti izvi zvinogoneka.
4. Iva nechokwadi chekuti wakatsaurira kuchengetedzwa kwemafoni nhare
Kuchengetedza kwekubiridzira kwakakosha kumatunhu ese ecommerce, asi kutyisidzira kwekuchengetedza kwakasiyana munzira. Paunenge uchisarudza PSP, ita shuwa kuti vanogona kupa yakachengetedzeka kuchengetedzeka kune nharembozha, sekunyepedzera kushandisa nharembozha kazhinji kwakasiyana nehunyengeri hwakaitwa online. Iko kusununguka kweye mobile mubhadharo maitiro uye mashoma ruzivo akapindwa nemushandisi anogona kuwedzera hunyengeri njodzi, zvichiita kuchengetedzeka kwakanyanya. Matekinoroji ekuchengetedza mafoni anosanganisira ekuteedzera ekushandisa uye kuenzanisa nzvimbo yavo kubhadharisa uye kutumira kero, pamwe nekuongorora zvishandiso nekufamba kwenguva, kuti vaone chero zviitiko zvinofungidzirwa kana chiitiko.
5. Shanda nePSP inopa mhinduro yakasanganiswa
Isu tataura nezve maitiro ekuita kuti mutengi ave neruzivo, asi ko iwe? Semunhu mutengesi, iwe uchazoda iyo nhare yekubhadhara nzira kuti ive nyore kuitisa. Chakanaka mubatsiri webasa rekubhadhara (PSP) ichapa mhinduro yakasanganiswa kune ese mafoni nedesktop, ine nzira dzakasiyana siyana dzekubhadhara. Ivo vanofanirwa kupa maturusi anoita kuti zvive nyore kwauri kuti ubatanidze nzira dzekubhadhara nhare. Zvishandiso izvi zvinogona kusanganisira software yekuvandudza kits uye nhare yekubhadhara maAPIs.
Yakanakisa nharembozha yekubhadharisa nzira zvinoreva kudhizaina nharembozha kuti ienderane nezvinodiwa nemushandisi wefoni Gadzira yakasarudzika nharembozha inoratidzira yako desktop saiti, uye uishongedze neyakakodzera chengetedzo uye nzira dzekubhadhara, yevanofara vatengi vemafoni, uye kuwedzera kutendeuka.
Tags: kutengeserana kwenharemobile friendlymobile kubhadharanharembozhaomni-chiteshi kutengapsp
Infusionsoft Zvino Inosanganisira Inoteerera, Isina Makodhi, Dhonza uye Kudonhedza Mapeji Ekumhara
Ari Pamhepo Software Marekodhi Shamwari YePuratifomu kana Anokwikwidza?